COVID-19 mitemo yekukwikwidza yakapihwa chiDutch Caribbean chitsuwa cheSt. Eustatius
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eustatius Kuputsa Nhau » COVID-19 mitemo yekukwikwidza yakapihwa chiDutch Caribbean chitsuwa cheSt. Eustatius
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Eustatius Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo munaFebruary 1, 2021, zvikepe zvinoshanyira Statia kubva kunyika dzine njodzi dzinogona kunyorera mvumo yekupinda pachitsuwa pasina kudiwa kwekuiswa wega.
Yacht dzinobva kune nyika dzine njodzi dzinogona kunyorera mvumo yekupinda pasina kudiwa kwekuisa wega
Yachts ese anotenderwa kunamira muStatia mvura pasina kuenda kumahombekombe.
Vagari veStatia vanogona kuseva ngarava dzavo pachiteshi chengarava
Hurumende yeSt. Eustatius (Statia) yakapa mirairo mitsva maererano nekugara kwechitsuwa kwema yachts panguva Covid-19.
Sezvo muna Kukadzi 1st, 2021, zvikepe zvinoshanyira Statia kubva kune nyika dzine njodzi dzinogona kunyorera mvumo yekupinda pachitsuwa pasina kudiwa kwekupatsanurwa. Zvikumbiro zvekupinda zvinofanirwa kugashirwa kanokwana maawa makumi manomwe nemaviri zuva risati rasvika rekuuya. Kubvumidzwa kuchave mukati maawa makumi mana nemasere mushure mekugamuchira chikumbiro.
Vashandi vese pazvikepe zvakashanyira nyika ine njodzi huru mukati memazuva gumi nemana ekupedzisira, vanofanirwa kugara vari vega muchikepe kwemazuva gumi nemana vasati vabvumidzwa kuenda kumahombekombe kuStatia.
Zvikoro zvekudonha pachitsuwa ichi zvinogona kushanyira zvikepe kubva kunyika dzine njodzi zvakanyanya uye kuronga nzendo dzekudonha zvakananga kubva kuchacht. Iwo akasiyana paaya yachts anofanira kunge aine chitupa chePADI.
Kunyangwe chiteshi ichi chakavharwa zviri pamutemo kudzamara chimwe chiziviso, vagari vemuStatia vanogona kuseresa ngarava dzavo pachiteshi chengarava. Kana ngarava dzikaedza kumonerera mune chero imwe nzvimbo, dzinozoendeswa kune iyo pier pier.